/Blog/Ithala/I-Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) isebenza njani kubaakhi bomzimba
ezaposwa ngomhla 11 / 18 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
1. Yintoni iPyridoxal Hydrochloride?
IPyridoxal Hydrochloride okanye i-vitamin B6 Ngaba ivithamini enyibilikiswa ngamanzi efumaneka rhoqo ekutyeni. Isetyenziselwa ikakhulu njengesongezelelo sokutya.
Xa isetyenziswa njengesongezelelo, iPyridoxal Hydrochloride inokunyanga okanye ithintele iingxaki ezininzi zonyango. Ihlala ithathwa ngenaliti, ngomlomo okanye kwizongezo zokutya.
Ukuba ungumakhi womzimba, le vithamini ilungele wena kuba inemisebenzi eliqela eluncedo emzimbeni. Umzekelo, unceda umzimba wakho ekwenzeni i-lipids, i-carbohydrate, kunye neeamino acid eziyimfuneko ekusebenzeni komzimba ngokupheleleyo.
Imithombo eqhelekileyo ye-pyridoxine hydrochloride Vitamin B6 kwisidlo ibandakanya okusanhlamvu, inkukhu / iturkey, imifuno kunye neziqhamo.
2. Kutheni ama-bodybuilders efuna iiVitamini - ipyridoxine Hydrochloride?
Kutheni le nto iivithamini zibaluleke kangaka kubakhi bomzimba? Ukuze ugqibezele yonke imisebenzi onayo ngosuku, kuya kufuneka wondle umzimba wakho kwizondlo ezahlukeneyo. Ukungalungelelani nakwezinye zezi zondlo kuya kubangela ukwahlukana kwendlela yemetabolism. Oku kuya kukhokelela kwintsebenzo ephantsi kunye nokusebenza gwenxa.
Njengomakhi womzimba, uyakufuna izakhamzimba ezingakumbi kunezo zikhokelela ekuhlaleni phantsi. I-B-6 pyridoxine hydrochloride ibaluleke kakhulu kuwe kuba iyimfuneko kwimisipha phosphorylase, umsebenzi onxulunyaniswa nemetabolism ye-glycogen. Ngamafutshane, udinga i-vitamin B6 yemetabolism esempilweni. Vitamin B6 iphucula imisebenzi yee enzymes ezithatha inxaxheba ekuqhekekeni kweprotein.
Iziphumo zePyridoxine hydrochloride emzimbeni zinento yokwenza nendima yayo kwiprotein metabolism. Yiyo loo nto xa uyisebenzisa, kucetyiswa ukuba utye isidlo sakusasa ngeprotein ngaphambi kokuba ube nokuzivocavoca. Unokuthatha ukutya okune-protein eninzi ngexesha lokuzivocavoca ngaphambi kokuba usebenze, ngelixa uziqeqesha, emva koqeqesho nangaphambi kokuba uye kulala.
Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba uyakuhoya okunye ukutya. Umzimba wakho udinga inkitha yezinye iiminerali eziyimfuneko ukuze usebenze ngokukuko kunye nokukukhusela kwizifo.
3. Iba yintoni ifuthe lePyridoxine Hydrochloride njengevithamini yomzimba?
Isizathu sokuba kufuneke uthathe inani elaneleyo le-B6 kukuba inegalelo elininzi kwiziphumo ezininzi zeekhemikhali ezibandakanya ii-amino acid kunye neeproteni.
Njengomakhi womzimba, uyifuna ngakumbi ukwakheka kweseli ebomvu. Kuya kufuneka ukuba wandise iiseli zakho ezibomvu ukulawula ukuphuma kwamanzi kunye nokuqinisekisa ukuba umzimba wakho ufumana ioksijini eyaneleyo.
Esinye isizathu sokuba kutheni ufuna i-B6 kukuba kuphucula umgangatho wakho wokumelana noxinzelelo. I-B6 yenza i-iron ekutyeni kwakho ukuba ifumaneke ngakumbi. Izihlunu zakho zifuna i-iron ngakumbi kunye ne-hemoglobin (ioksijini) yokunyamezela uxinzelelo.
Kananjalo kufuneka amandla amaninzi ngexesha lokuphuma komsebenzi. IPyridoxine hydrochloride iyanceda umzimba wakho ngokwandisa izinga lokutsha kwe-carbohydrate kwiiseli zakho. Oku kukuqinisekisa ukuba ufumana amandla awaneleyo.
Ngexesha loqeqesho, kuya kubakho uxinzelelo kwinkqubo yokuvelisa amandla emzimbeni wakho. Kuya kubakho iinguqu kwizicubu zomzimba wakho ngenxa yemisebenzi eyindinisa. Ngapha koko, uya kuphulukana namanani amakhulu ezakha mzimba kwimichiza, umchamo, kunye nokubila ngenxa yokwanda kwemetabolism.
Ngezi zizathu, kuyakufuneka uzibuyise izondlo zomzimba wakho. Unokwenza oku ngokuthatha ii-supplements ukugcina kunye nokulungisa ubunzima bethishu. Oku kuyakuqinisekisa ukuba izicubu zakho zihlala zinamathele kwaye zomelele. Akukho songezelelo esingcono kune-pyridoxine hydrochloride Vitamin B6 xa ufuna ukwakha kwakhona ubunzima bomzimba wakho.
4. Imbali yePyridoxal Hydrochloride
IPyridoxal Hydrochloride (65-22-5) yenziwe okokuqala kwi-1939 kodwa yafunyanwa kwi-1934. Ukufunyanwa kwayo kwenziwa nguPaul Gyorgy, ugqirha waseHungary. Wayithiya igama njengevithamini B6 kwaye wayisebenzisa ukunyanga isifo seswekile ekuthiwa yi-dermatitis acrodynia.
Kwiminyaka emihlanu emva kokufunyanwa kwayo, omnye usosayensi, uSamuel Lepkovsky wakwazi ukwahlulahlula i-rayisi ye-riga ukuze ifumane ipyridoxine hydrochloride powder.
Kwi-1939, iiFolkers kunye noHarris bamisela ubume bepyridoxine. Kwiminyaka emithandathu kamva, uSnell wabonisa ukuba i-B6 yayineefom ezimbini: i-pyridoxamine kunye ne-pyridoxal. Igama iPyridoxal Hydrochloride yeza ngenxa yokuba iivithamini B6 yayicwangcisiwe ngokomzimba kwi-pyridine.
Namhlanje, uMbutho wezeMpilo weHlabathi ubandakanya iPyridoxal Hydrochloride kuLuhlu lwabo bamayeza ayimfuneko. Oku kungenxa yokuba bayithatha njengenye yezona zonyango zikhuselekileyo nezona zisebenzayo kwiinkqubo zezempilo. Ifumaneka ngaphezulu kwe-counter kunye nonyango olufana nonyango.
5. Idosi yePyridoxal Hydrochloride yabakhi bomzimba
Phakathi kweevithamini ze-B, i-Pyridoxal Hydrochloride yeyona nto ibaluleke kakhulu kokubini kwimpilo yomzimba neyengqondo yabakhi bomzimba. Inceda ekukhuleni kweeseli ezintsha, echaza IPyridoxine hydrochloride yokwakha umzimba ubuchule. I-B6 ikwanceda ekulinganiseni i-potassium kunye ne-sodium, nasekuqulunqweni kwe-asidi ye-niticic, iDNA kunye ne-RNA eyinxalenye yayo.
Abasetyhini banokuyisebenzisa ukulungelelanisa iihomoni kwaye bancedise ekungakhuselekini ngexesha lokukhulelwa. Ikwadibanisa nokugcinwa kokugcwala kwamanzi ngaphambi kwexesha kunye nokunciphisa iintlungu zokuya esikhathini kunye namabala.
Ukunqongophala kwePyridoxal Hydrochloride kukhokelela kukothuka, ukungabinangqondo, ukulala, ubuthathaka, ulwimi olunobushushu, izipikili ezisusiweyo, isifo samathambo kunye nesifo samathambo.
I-dosage ephakanyisiweyo ye-FDA yi-2mg, kodwa kunye nezongezelelo, idosi eqhelekileyo yi-20mg. IPyridoxal Hydrochloride inokuba yityhefu xa uthatha ngaphezu kwe-2000mg.
Nangona kunjalo, ngokutsho kolunye uphando, ithamo ye-Pyridoxal Hydrochloride yeyona nto iphakanyisiweyo kubantu abasebenzayo nguRhulumente wase-US ayanele.
Oku kuthetha ukuba abo banciphisa amaqela okutya okanye bathintele iikhalori banokubaleka umngcipheko wokunqongophala. Ke, abanako ukuxhamla kwimiphumela ye-pyridoxine hydrochloride ukuba ngaba bathabatha kuphela idosi njengoko kuvunywa ngurhulumente.
Ngokusekwe kwiziphumo zolu phando, kuya kuba bubulumko ukubonana nengcali yakho yezempilo ukukunceda ukuba ufumane eyona dosage yokwakha yomzimba efanelekileyo / efanelekileyo.
6. Ukusetyenziswa kwezonyango kwePyridoxal Hydrochloride's Medical
Akukho kunqongophala okukhulu kweevithamini B6 e-US, kodwa kunokwenzeka ngakumbi kubantu abadala nasebantwaneni. Ukuba ubhekene neemeko ezinje ngehyperthyroidism, isifo se-celiac, isifo se-autoimmune, isifo sezintso, okanye utywala obuxhomekeke kuwe ke usemngciphekweni ophezulu wokuphelelwa yi-Vitamin B6.
Umzimba awunako ukuvelisa ivithamini B6, ke kufuneka uyifumane kwizongezo okanye kukutya. Kuyimfuneko ukusebenzisa izixa ezaneleyo zeevithamini ukunyanga nokukhusela izifo ezingapheliyo kunye nempilo efanelekileyo.
Nazi izinto ezisetyenziswa kwisayensi zonyango ezixhaswe ipyridoxine hydrochloride:
(1) Ukuncipha kweempawu zoXinzelelo kunye nokuPhucula kweMood
I-B-6 pyridoxine hydrochloride Dlala indima ebalulekileyo kulawulo lwemoods. Kungenxa yokuba zenza ii-neurotransmitters ezilawula iimvakalelo. I-Pyridoxine hydrochloride ekukhulelweni ibaluleke kakhulu kwabasetyhini abanokuziva ngokweemvakalelo okanye abaneemeko eziguqukayo ezibangelwa kukungalingani kwehomoni ngexesha lokukhulelwa.
I-B6 iphinda inciphise amanqanaba egazi e-homocysteine, i-amino acid enoxanduva lweengxaki zengqondo ezinje ngoxinzelelo. Izifundo ezininzi zidibanise iimpawu zokudakumba ezinamanqanaba asezantsi e-pyridoxine hydrochloride esegazini.
(2) Ukunciphisa umngcipheko we-Alzheimer kunye nokukhuthaza impilo yeBongo
Vitamin B6 iyaziwa ngendima yayo ekuphuculeni umsebenzi wengqondo kunye nokuthintela isifo sika-Alzheimer's. Yehlisa amanqanaba e-homocysteine ​​egazini ngaloo ndlela inciphisa umngcipheko wokukhubazeka kwememori kunye ne-Alzheimer's.
Olunye uphononongo olubandakanya abantu abadala be-156 abanesifo sokuqaqanjelwa kancinci kunye namazinga aphezulu e-homocysteine ​​bafumanisa ukuba i-pyridoxine hydrochloride dosage ephezulu iyanciphisa amanqanaba e-homocysteine ​​egazini kunye nokunciphisa ukonakaliswa kwamanye amalungu engqondo asengozini ye-Alzheimer's.
(3) Ukuthintela kwaye Ukuphatha i-Anemia
Vitamin B6 iyathintela kwaye iphathe i-anemia ebangelwa kukusilela kwayo. Kungenxa yokuba idlala indima kwimveliso ye-hemoglobin. IHemoglobin ihambisa ioksijini kwiiseli zomzimba. Ngomgangatho ophantsi we-hemoglobin, iiseli zakho aziyi kufumana ioksijini eyaneleyo kwaye ngenxa yoku, uya kuphuhla i-anemia kwaye uzive udiniwe okanye ubuthathaka.
Amanqanaba asezantsi e-vithamini B6 edityaniswe ne-anemia, ngakumbi abasetyhini abakwiminyaka yokuzala okanye abo bakhulelweyo.
(4) Iphatha iiMpawu ze-Premenstrual Syndrome (PMS)
Enye yezibonelelo ze-pyridoxine hydrochloride kukuba inokusetyenziselwa ukunyanga iimpawu ze-PMS kubandakanya ukungakhathali, uxinzelelo kunye noxinzelelo. Abaphandi bakholelwa ukuba i-Vitamin B6 inokunyanga ezi mpawu kuba zenza ii-neurotransmitters ezinceda kummiselo womoya.
Kwisifundo esinye esincinci, kwafumaniseka ukuba iimpawu ze-PMS kubandakanya uxinzelelo, ukungabinamandla, kunye nokutshintsha kwemozulu kunokuncitshiswa kakhulu ngokuthatha i-200mg ye-magnesium kunye ne-50mg yevithamini B6 ngemini.
(5) Iphatha i-nausea ngexesha lokukhulelwa
Kwiminyaka emininzi, ivithamini B6 isetyenziselwe ukunyanga isicaphucaphu kunye nokugabha kwabasetyhini abakhulelweyo. Ikwasisithako se-Diclegis, ichiza elisetyenziswa kunyango lokugula kwentsasa. Oku kuphakathi kwezibonelelo eziphambili ze-pyridoxine hydrochloride yabasetyhini abahlupheka yile meko ngexesha lokukhulelwa kwabo.
I-pyridoxine hydrochloride elungileyo yedosi ekukhulelweni iyahluka ukusuka komnye umntu. Uphononongo olubandakanya abasetyhini abakhulelweyo be-342 bafumanise ukuba idosi yemihla ngemihla ye-30mg yevithamini iyanciphisa imvakalelo yabo yokuba nesicaphucaphu kwiintsuku nje ezintlanu emva kokuqala konyango.
Kolunye uphononongo olubandakanya abasetyhini abakhulelweyo i-126, iziqendu zesicaphucaphu kunye nokugabha kuncitshiswe kakhulu ngokuthatha i-75mg ye-vitamin B6 imihla ngemihla. Iimpawu ezincitshiswe yi-41% emva kweentsuku ezine zibonisa ukusebenza kwe-pyridoxine hydrochloride yokukhulelwa.
(6) Unciphise umngcipheko wesifo sentliziyo ngokuthintela imithambo ye-Clogged
IPyridoxine hydrochloride idlala indima enkulu ekuthinteleni ukuvalwa kwemithambo yegazi ngenxa yoko kunciphisa umngcipheko wesifo sentliziyo. Ukuba unamanqanaba asezantsi e-Vitamin B6, umngcipheko wakho wokufumana isifo sentliziyo uya kuphantse uphindwe kabini xa kuthelekiswa naleyo inamanqanaba aqhelekileyo evithamini egazini. IVitamin B6 inciphisa amathuba okuvalwa kwemithambo yegazi ngokunciphisa amanqanaba e-homocysteine ​​egazini.
Kuphononongo olunye olubandakanya iigundane ezazingalunganga kwiVithamini B6, kwafunyaniswa ukuba banamanqanaba aphezulu e cholesterol kwaye nabo bakhulisa izilonda. Oku kunokubangela ukuvakala okungxamisekileyo kwimeko yokuba bavezwe kwi-homocysteine. Olunye uphando olubandakanya abantu lubonakalisile ukuba ivithamini B6 inokuthintela izifo zentliziyo.
(7) Inceda ekuthinteleni umhlaza
Oku mhlawumbi kubaluleke kakhulu I-pyridoxine hydrochloride isebenzisa esinikiweyo ukwanda komhlaza namhlanje. Ukuba ufumana ngokwaneleyo iPyridoxine hydrochloride, umngcipheko wakho wokukhulisa iintlobo ezithile zomhlaza uya kuncitshiswa. Isizathu soku asicacanga kodwa abaphandi bakholelwa ukuba kuhambelana nokukwazi kwe-B6 yokulwa nosulelo olubangela iimeko ezingapheliyo ezinje ngomhlaza.
Emva kokuphononongwa kwezifundo ze-12, abanye abaphandi bagqibe kwelokuba inqanaba legazi elaneleyo le-B6 linxulunyaniswa nomngcipheko ophantsi wokufumana umhlaza webala. Ukuba unamanqanaba aphezulu e-B6, amathuba akho okuphuhlisa umhlaza we-colorectal uya kuncitshiswa nge-50% xa kuthelekiswa naleyo inamanqanaba asezantsi e-B6.
Kuphando oluthile olwenziwe ukumisela ubudlelwane phakathi kwamanqanaba e-pyridoxine hydrochloride kunye nomhlaza wamabele, kwafunyaniswa ukuba amanqanaba afanelekileyo e-B6 egazini anciphisa umngcipheko wesifo somhlaza webele, ngakumbi kubafazi abalandela i-postmenopausal.
(8) Ukuthintela ukugula kwamehlo kunye nokukhuthaza impilo yeLiso
IVitamin B6 inceda ukunqanda izifo zamehlo, ngakumbi ezo zinxulumene nokwaluphala-ubudala obunxulumene nobudala be-macular degeneration (AMD). Xa unamanqanaba aphezulu e-homocysteine ​​ahamba egazini lakho, uya kuba semngciphekweni omkhulu wokukhula i-AMD. IPyridoxine hydrochloride inceda ekunciphiseni amanqanaba aphezulu e-homocysteine ​​kwigazi ngenxa yoko kunciphisa umngcipheko we-AMD.
Ngokutsho kolunye uphando olwenziwe kubantu besetyhini abangaphezulu kwe-5,000, kwafunyaniswa ukuba idosi yemihla ngemihla yevithamini B6 idityaniswa neVithamini B12 kunye ne-folic acid iyawunciphisa umngcipheko we-AMD ukuya kuthi ga kwi-40%, xa kuthelekiswa nabo bangazithathi iivithamini.
Olunye uphando oludibanise iingxaki zamehlo kumanqanaba asezantsi egazini; Ingxaki zamehlo ekhokelela ekuqhekekeni kwamasebe aqhagamshelwe kwi-retina. Inqanaba eliphantsi le-pyridoxine hydrochloride ikwanxulunyaniswa nokuphazamiseka kwiretina.
(9) Ukuphathwa kwe-Rheumatoid Arthritis Ukuvuvukala
Ukuba unesifo sokuvuvukala kwamathambo, ukuthatha i-B6 kunokukunceda ukunciphisa intlungu yakho. Isifo samathambo ngokwaso sehlisa amanqanaba e-B6 emzimbeni kwaye eli nqanaba kufuneka lilungiswe.
Uphononongo olwenziwe kubantu abadala be-43 bafumanisa ukuba idosi yemihla ngemihla yokudibanisa i-5mg ye-folic acid kunye ne-100mg ye-B6 yehlise kakhulu izinga leemolekyuli kwimizimba yabo emva kweeveki ze-12.
7. Iziphumo ezibi zePyridoxal Hydrochloride
IPyridoxine hydrochloride ikhuselekile ukuba isetyenziswe ngabakhi bomzimba. Kukhuselekile ukusetyenziswa kwezonyango. Nangona kunjalo, ineziphumo ezahlukeneyo kubantu abahlukeneyo Ezinye zeziphumo ze-pyridoxine hydrochloride zibandakanya:
Iimpawu zokungqubana komzimba njengokubanzima ekuphefumleni, emilenzeni, ukudumba kwemilebe yakho, ubuso, umqala okanye ulwimi
Unciphiso lweemvakalelo kunyikima, ubushushu, kunye nokuchukumisa
Ukuziva udiniwe okanye ukungakhathali ezandleni zakho
Ukuphulukana nokulungelelanisa okanye ukulungelelana
Ubungqindilili obuthambileyo okanye ukudakumba, ukujija okanye ukuziva uvutha ezinyaweni nasezandleni
Amanxeba akujikeleza umlomo okanye ezinyaweni
Uvelwano kukukhanya kwelanga
Ukuba ufumana iziphumo ezibi ze-pyridoxine hydrochloride, kunokuba kubhetele ukuba ufune unyango.
8. Zeziphi izilumkiso kunye namanyathelo okhuseleko e-Pyridoxal Hydrochloride?
Iidosi eziphezulu kakhulu zePyridoxal Hydrochloride zinokubangela ukuphazamiseka kwemithambo-luvo. Ezi ziphazamiso zinokuthi, zikhokelele kwiingxaki zokuqina kunye nokulahleka kwemvakalelo emilenzeni. Kukho neengxelo zokuba idosi ephezulu ye ipyridoxine hydrochloride kunokukhokelela ekuphenduleni kolusu. Ngethamsanqa, xa uyeka iidosi eziphezulu, uya kuphola ngokupheleleyo.
Kuyacetyiswa ukuba ungathathi iidosi eziphezulu zelichiza xa ukhulelwe. Ugqirha oqeqeshiweyo kuphela ofanele amisele i-Pyridoxine hydrochloride dose ekukhulelweni. Qaphela ukuba nokuba ungumakhi ngokwasemzimbeni okanye hayi, akufuneki uthathe ngaphezulu kwe-100mg ye-pyridoxine hydrochloride ngemini ngaphandle kokuba uthethile nomnikezeli wakho wezempilo.
Xa ukwipilisi yePyridoxal Hydrochloride, akufanelanga uyeke, uqalise ukuyisebenzisa ngokudibeneyo nelinye ichiza, okanye utshintshe idosi ngaphandle kwemvume yomboneleli wakho wezempilo.
Nangona iPyridoxal Hydrochloride ingekazibandakanyi unxibelelwano olunzulu okanye olunzima kunye namanye amachiza, kusoloko kulungile ukuba ulumke.
I-Cordarone (Amiodarone) yonyusa ubushushu kwimitha yelanga xa idityaniswa neB6. Olu dibaniso lunokwonyusa amathuba akho okubandezeleka kwimithambo, ukugqabhuka, okanye ukutshiswa lilanga kwiindawo ezichaziweyo zolusu lwakho. Qiniseka ukuba unxibe impahla ekhuselayo okanye ibhloksi yelanga xa uthatha indibaniselwano.
Umzimba wakho waphula i-Luminal (Phenobarbital) ukuze uwukhuphe. I-Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) inyusa izinga apho i-Luminal iphulwe khona ngaloo ndlela kunciphisa ukusebenza kwayo emzimbeni wakho.
Kanye njengeLuminal, iPyridoxal hydrochloride (65-22-5) Yaphule le khemikhali ukuyikhupha emzimbeni wakho. Ukuthatha indibaniselwano ye-Dilantin kunye nePyridoxal Hydrochloride kuya kunciphisa ukusebenza kwangaphambili emzimbeni wakho. Oku kunokonyusa amathuba okufumana ukubanjiswa okuthile.
Ezinye iziyobisi ezisebenzisana nePyridoxal Hydrochloride zibandakanya:
I-Hydrochloride ye-Pyridoxal inonxibelelwano oluthambileyo neziyobisi ezahlukeneyo ze-70. Ke, ngaphambi kokuba usebenzise naliphi na ichiza ngokudibeneyo nalo, qinisekisa ukuba uqhagamshelana nomnikezeli wakho wezempilo.
I-B6 isebenza kakuhle kunye nezinye i-B-vithamin MCT's, CLA, zinc, sodium, potassium, magnesium, kunye nevithamin C.
Izibonelelo zePyridoxal Hydrochloride kubakhi bomzimba zininzi. Ayisiye kuphela abakhi bomzimba, yonke iimbaleki ezinobunzima kufuneka ibenayo le vithamini kwisitokhwe. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyisebenzise ngokubambelela ngokungqongqo kwiidosi ezinconyelwe ziingcali zonyango.
Imisebenzi eluqilima ebandakanyeka ekwakheni umzimba ikhokelela ekunxibeni kweeseli zomzimba kunye nezihlunu. Kungcono ukubuyisela ezi usebenzisa ii-vithamini B6 zokuxhasa. Xa uthenga a IPyridoxal Hydrochloride imveliso, qinisekisa ukuba uyenza njalo kwimithombo efanelekileyo Aasraw. Ukwenza i-Pyridoxine hydrochloride ethengiweyo, ndwendwela nje ku-asraw.com namhlanje wenze umyalelo.
I-1 Osswald, H, et al, 1987 Impembelelo ye-sodium ascorbate, menadione sodium bisulfite okanye pyridoxal hydrochloride kwityhefu kunye nesenzo se-antineoplastic se-N-methylformamide kwi-P 388 leukemia okanye kwi-M 5076 sarcoma kwi-Mice Toxology 43 I-PMID: 2
I-2 Reimer, i-LG, et al, i-1983 Isiphumo se-pyridoxal ekukhuleni kwe-streptococci yesondlo kunye nezinye iibhaktheriya kwigazi le-agar Diagnostic microbiology kunye nesifo esosulelayo i-1 (4): 273-5 PMID: 6667606
I-3 Zygmunt, WA, et al, 1962 UKUHLAZIYWA KOKUGQIBELA KWE-D-CYCLOSERINE UKUKHUSELEKA KOKUKHULULWA KWEZOBHODI NGU-ALANINE Ijenali ye-bacteriology 84 (1): 154-6 PMID: 16561951
I-Flibanserin ilinceda njani ibhinqa njengeHormone yesini	I-Synephrine HCL Powder-Ukutshiswa kwamafutha kunye nezixhasi zokunciphisa umzimba